Fomba tsara kokoa, Fiangonana Eran-tany Manerantany Switzerland (WKG)
Rehefa nampianatra momba ny tenany sy ny fanaon ’Andriamanitra i Jesosy dia nanome fomba fijery vaovao ny zava-drehetra. Nasehony azy ireo fomba tsara kokoa, fomba iray fanahin'ny lalàna, fa tsy ny taratasy (amin'ny lalàna). Nasehony azy ireo ny fomba fitiavana fa tsy ny fomba fitsarana sy fanadinana. Izy nitondra azy (sy isika) fomba tsara kokoa.
Hoy i Piera tamin'i Hannas, mpisoronabe, Kaiafa, Jaona, Alexander ary havana hafa an'ny mpisoronabe, fa tsy misy famonjena afa-tsy amin'i Jesosy. "Tsy misy anarana hafa any an-danitra azon'ny olona hiantsoana hovonjena" (Asa. 4,12).
Angamba ny finoana tsotra, nefa tsy nanao na inona na inona ho famonjena, dia lalana mora ho an'ny sasany. Na mora mora. Na toa mora loatra ny miala amin'ilay mpangalatra eny amin'ny hazo fijaliana, izay nomena fangatahana tsotra mba hahatadidy an'i Jesosy. Azo atao ve ny mamafa firaketana olona mpanao heloka bevava izay manafintohina amin'ny hazo fijaliana amin'ny alàlan'ny fanekena tsotra fotsiny amin'ny olon-tsy fantatra iray nahantona teo amin'ny hazo fijaliana? Ny finoan'ny ilay mpangalatra dia ampy ho an'i Jesosy. Tsy isalasalana fa nampanantena io lehilahy io ho mandrakizay ao amin'ny paradisa izy (Lioka 23: 42-43).
Nasehon'i Jesosy fa tsy mila mitady fomba hafa, safidy na fomba hafa hanodinana ny saka ohabolana fotsiny isika. Mila manaiky am-bava fotsiny isika fa i Jesosy no Tompontsika ary mino amin'ny fontsika rehetra fa Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty ka hamonjy antsika (Romana 10: 9).